Hiran State - News: Tartan gubada cagta ah oo ay iskaka horyimaadeen 4 kooxood oo ay qaatay koox ka socotay Hiiraan State.
Tartan gubada cagta ah oo ay iskaka horyimaadeen 4 kooxood oo ay qaatay koox ka socotay Hiiraan State.
Kenya:(HS)-Tartan gubada cagta ah oo siweyn loo soo abaabulay laguna qabtay dalkaasi Kenya ayaa waxaa si xarako leh ugu guuleystay koox ku ciyaareysay magaca Hiiraan State.
koobkani oo loo dhigay ilaa 4 kooxood oo kala ah 1- Hiiraan State 2- Al Cimra 3- Tottenham
4- Suxufiyiinta.Ciyaarahani oo la ciyaaray maalintii qamiista aheyd ayaa Lagu Ciyaaray Garoon la yiraahdo Tiikeey iyadoo ay ciyaartii 1aad dhex martay kooxaha Al-Cimra iyo Tottenham Waxana ku kala tageen bar bar dhac amaba 1:1 iyadoo aaqirkiina Rigoorayaal ku kala badiyey.
Ciyaartii Labaad ayaa Waxaa Ciyaaray Kooxaha Hiiraan State iyo Suxufiyiinta Waxaana 8:0 Ku Badiyay Kooxda Hiiraan State oo dhalinyarada meteleysay ay u muuqdeen kuwo si wanaagsan iskula jaan qaadayey una awood sheegtay kooxdii ku ciyaarysay magaca suxufiyiinta.
Ugu danbeyn ciyaartii finalka waxaa isku arkey Hiiraan State iyo Tottenham Waxaana 4:0 Ku Badiyay Kooxda Hiiraan State oo Sidaas ku Hanatay Koobkii lagu Maamuusayay wadanka gumeysiga ku jira ee Somaliya.
Tan iyo markii la dhisay dowlad goboleedka Hiiraan State waxaa maalinba maalinta ka danbeysa soo kordhaya jaceyl loo hayo maamulkaasi iyadoo ay dadku inta badan aad ula dhacsan yahiin magaca loo bixiyey maamulkaas iyo sida uu u yahay magac qurux badan oo u qalma shacabka reer Hiiraan.
Dhalinta ku ciyaareysay magaca Hiiraan State ayaa reer Hiiraan u soo hooyeye sharaf madama maamulkii oo hada ugub ah magaciisa kaka qeyb galeen tartamada lagu qabanayo goobaha ka baxsan Somaliya amaba Hiiraan, waxaanu leenahay hadaanu nahay bahda HS.COMna guul.
Sideedaba marka laga hadlayo ciyaarta gubada cagta amaba goleyga Hiiraan waligeed meel ayey saari jirtay Somalida kale marka dib loogu laabto ciyaarahii Soamliya amaba kuwii goboalda ee bari samaadkiina inta badan kooxaha laga cabsan jiray xiligaasi sida Kismaayo iyagu wey ugu jeclaayeen waayo reer Hiiraan waxey ka sameysan yahiin jaalanjiga iyadoo ciyaartii ugu xiisaha badneyd xiligaasi Kismaayo iyo Hiiraan taariikhda gashay iyadoo wargeysyadii xiligaasi jiray lagu soo daabacay Maroodigii Qoonada ligi waayey.
Inkasta oo ciyaarahii dhawaantan ka dhacay magaalada Garoowe ay ahaayeen kuwo si kedis ah loogu soo sheegay dhalintii reer Hiiraan ee tartankaasi ka qeyb gashay hadane kuwa soo socda waxaa lama huraan ah iney dhalinta reer Hiiraan guulo ka keenaan.
· admin on July 03 2011 03:14:21 · 0 Comments · 2868 Reads ·
14,568,773 unique visits